Virserums hostel | Hultsfred သို့သွားပါ
နေအိမ် » 🛏️ နေထိုင်ရန် » 🛏️ ဘော်ဒါဆောင် » Virserum ဘော်ဒါဆောင်
ဤနေရာတွင်သင်သည်Smalspåret၊ Astrid Lindgren's World၊ Virserums Konsthall နှင့်အခြားသောလုပ်ဆောင်မှုများစသည်တို့နှင့်နီးကပ်စွာစျေးပေါ။ သက်သောင့်သက်သာရှိသည်။ အများဆုံးသောအရာနှင့်နီးစပ်သောတစ်အိမ်။
Rummen är fräscha och fina och håller en hög standard. Vandrarhemmet ligger i centrala Virserum med gångavstånd till restaurang och mataffär. Fri WiFi.
SödraJärnvägsgatan 9, 570 80 Viserum, ဆွီဒင်
4.2 ထဲက 5.0
Google တွင် 46 ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များ
5/5 လွန်ခဲ့သော 8 လက
အခန်းကောင်း သန့်ရှင်းသပ်ရပ်ပြီး သပ်ရပ်ကောင်းမွန်သော အခန်းများ နေထိုင်ရန် ကောင်းပါတယ်။ ဝန်ထမ်းကောင်းများ တည်းခိုရန် အကြံပြုလိုပါသည်။
5/5 လွန်ခဲ့သော9လက
ဝန်ထမ်းကောင်းနှင့် အခန်းကောင်း။ အများစုမှာ အချိုရည်များနှင့် အချိုရည်များအပြင် တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုဆိုင်ရာ ပစ္စည်းများတွင်လည်း kiosk တွင်ရှိသည်။
4/5 လွန်ခဲ့သော 11 လက
ရည်ရွယ်ချက်နှင့်စျေးနှုန်းအဘို့အperfectlyုံ ok သောရိုးရှင်းသောဘော်ဒါဆောင်။ အလယ်ဗဟိုတွင်တည်ရှိပြီးရေနှင့်နီးသည်၊ ရေကန်တစ်လျှောက်လှပသောလမ်းလျှောက်များရှိသည်။ တီဗီခန်းများ၊ အိမ်သာများနှင့်ရေပန်းရေချိုးခန်းအပြင်မီးဖိုချောင်ကောင်းတစ်ခုရှိပြီးလူတိုင်းအတွက်ထိုင်ခုံများနှင့်သင်ရေခဲမုန့်၊ ချိုချဉ်အချို့နှင့်အခြားအရာများ ၀ ယ်ယူနိုင်သောနေရာမရှိသောကင်မရာဖြင့်စောင့်ကြည့်ထားသော (ကောင်းမွန်သော) reception ည့်ခံမှုများရှိသည်။ အကြံပြုပါသည်
5/5 လွန်ခဲ့သော 10 လက
အရမ်းသဘောကောင်းတာပဲ! အရမ်းလန်းတယ်။ သက်တောင့်သက်သာရှိသောအိပ်ယာ၊ ချစ်စရာရေချိုးခန်း။ ငါဒီကိုပြန်လာချင်တယ်။
1/5 လွန်ခဲ့သော3နှစ်က
ကုတင်က ကျောက်သားမာကျောတဲ့ တခြားပုခက်ခေါင်းအုံးတွေ က အမာရွတ်လေးတွေနဲ့ အိပ်ရတာ အရမ်းဆိုးတယ်။
အခန်းအသစ်များကိုအသစ်ပြုပြင်ပြီးအဆင့်အတန်းမြင့်စွာထိန်းသိမ်းထားသည်။ အဆိုပါဘော်ဒါဆောင်သည်စားသောက်ဆိုင်နှင့်ကုန်စုံဆိုင်သို့လမ်းလျှောက်ရန်အကွာအဝေးရှိသော Virserum အလယ်ပိုင်းတွင်တည်ရှိသည်။ အခမဲ့ဝိုင်ဖိုင်